Pep Guardiola Oo Magacaabay Kooxdii Iyo Tababarihii Hurdada U Diiday Ee Xataa Habeenkii Uu Ka Fikiri Jiray Sidii Uu Uga Adkaan Lahaa - Mourinho Mise Klopp? - Gool24.Net
Pep Guardiola Oo Magacaabay Kooxdii Iyo Tababarihii Hurdada U Diiday Ee Xataa Habeenkii Uu Ka Fikiri Jiray Sidii Uu Uga Adkaan Lahaa – Mourinho Mise Klopp?
July 31, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa magacaabay kooxdii ugu adkayd ee uu abid ku waajahay garoomada iyo tababarihii ugu wanaagsanaa ee hurdada u diiday, kuwaas oo xataa habeenkii uu ka fikiri jiray sidii uu uga badin lahaa.
Pep Guardiola ayaa Manchester City horyaalka Premier League u qaaday labadii xili ciyaareed ee 2017/18 iyo 2018/19 ka hor intii aanay Liverpool ku garaacin xili ciyaareedkan, laakiin waxay muddo dheer soo xafiiltameen Jose Mourinho oo ay horyaalka waddanka Spain ee LaLiga maryo dhiig leh kusoo kala furteen.
Xili ciyaareedkii 2018/19 ayay Manchester City dhibic kaliya kaga qaaday horyaalka Liverpool oo nasiibku ka hiiliyey kulamadii ugu dambeeyey oo ay mid ka mid ah barbarro gashay, halka Citizens ay noqotay mid la qaban kari waayey, laakiin Jurgen Klopp ayaa ka aarsaday oo fasal ciyaareedkii dhowanata dhamaaday dhibco rikoodh jabis ah kaga qaaday koobka.
Sannadaha ay labadan tababare xafiiltanka ku jireen, waxa isaguna geestiisa kala loollamayay Jose Mourinho oo Manchester United tababare u ahaa ka hor intii aanu waqti kooban kaddib soo fadhiisanin kursiga kooxda Tottenham Hotspur.
Balse macallinka reer Portugal ee Jose Mourinho, waxa uu Guardiola si xun ugu karbaashay semi-finalkii Champions League ee 2010 oo isaga casaan uu ka qaatay Thiago Motta haddana waddo cad mariyey Guardiola. Horyaalka Spain ee LaLiga ayaa sidaas oo kale ugu xafiiltameen muddadii ay Mourinho iyo Guardiola kala hoggaaminayeen Real Madrid iyo Barcelona.
Tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola ayaa ugu dambayn shaaciyey tababarihii ugu adkaa ee uu ku waajahay garoomada iyo kooxdii hurdada u diiday ee uu waqtiyada badan ka fikiray sidii uu uga guuleysan lahaa, xataa xilliyo aan garoonkaba la joogin.
Waraysi uu siiyey DAZN, ayaa waxa uu ku caddeeyey in tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp iyo kooxdiisu ay yihiin kuwii ugu adkaa uguna wanaagsanaa ee uu abid waajahay, waxaanu yidhi: “Kooxdii ugu adkayd ee aan waajahay intii aan xirfadda ku jiray waa Liverpool-shii sannadkii hore iyo sannadkanba. Haddii aad isku qaadato inaad ciyaarta haysato, isla goobtaas ayay kugu garaacayaan, kamana baxsan kartid. Marka aad kubadda ka hayso, waxay ku ordaan meelo aanay cid kale ordi karin.
“Waxay haystaan ciyaartooyo aad u dheereeya, istaraatiijiyad ahaanna aad ayay u xooggan yihiin. Ciyaartoygoodu maskax ahaan ayay aad xooggan yihiin.”
Intaas kaddib waxa uu shaaciyey tababarihii ku kallifay inuu fikir dartii hurdada ledi waayo, waxanau yidhi: “Klopp ayaa ah tababarihii aanu xafiiltannay ee igu kallifay inaan waqti badan ka fikiro sidii aan uga badin lahaa.”
Barcelona oo uu Pep Guardiola kasoo bilaabay tababarenimadiisa guulaha badan bilowgiiba la kowsatay, waxa uu rumaysan yahay in xirfaddiisa iyo horumarka uu sameeyey ay gacan weyn ka geysatay Real Madrid oo ay xafiiltameen, waqtigii uu Jose Mourinho joogay, waxaanu yidhi: “Mar walba waxaan sheegaa in Real Madrid ay ahayd koox aad u xoog badan intii aan xirfadda ku jiray, waxay iga caawiyeen inaan noqdo tababare wanaagsan maadaama kulamo adag aanu iskaga hor imanaynay tartamada iyagoo haystay Jose Mourinho, Manuel Pellegrini iyo dhamaan tababareyaashii kale ee ay haysteen.”
Liverpool iyo Real Madrid ayaa la weydiiyey inuu kala saaro midkooda ugu adkaa, waxaanu yidhi: “Haddii aad i weydiiso kooxdii ugu adkayd ee aanu foodda is darnay, waxay ahayd Liverpool. Sannadkii iigu horreeyey ee aan imid England, Liverpool way ka diciifsanayd sida ay hadda tahay, Real Madrid ayaana xoogganayd, laakiin hadda, Liverpool ayaa ah kooxda ugu adag ee aanu iska hor nimid intii aan tababaraha ahaa.”